Maro ny olona amin'izao fotoana izao no tia fanatanjahan-tena, ary toy ny fanatanjahan-tena amin'ny fitafiana . Anisan'ireo zavatra ao anatin'io fitarihana io, dia mendrika indrindra ny manamarika ireo haingon-tsariby mahazatra.
Svitshot - akanjon'antambo amin'ny akanjo na kiraro amin'ny kiraro. Ary amin'ny fandikan-teny ara-bakiteny, ny anarany dia midika ho mpivarotra fanatanjahan-tena. Ny tena mampiavaka an'ity akanjo ity dia ny hoe rehefa aorian'ny fampiasana ara-batana dia afaka mivoaka malalaka eny amin'ny arabe tsy misy tahotra ny hangatsiaka.
Saingy ity hevitra momba ny dikan-teny nentim-paharazana ity. Modely maoderina, anisan'izany ny felam-bintana malaza indrindra, azo noforonina avy amin'ny fitaovana isan-karazany. Ao amin'izy ireo dia misy seza sy akanjo, ary misy zavatra marihina amin'ny volon'ondry na cashmere. Saingy ny iray amin'izy ireo dia afaka manana printy mamirapiratra sy applets, ary na ny embroidery miaraka amin'ny perla.
Ny fametahana malalaka sy ny akanjo raglan dia manana ny modely rehetra amin'ity akanjo ity. Izany no antony itondrany vehivavy, na dia "feno fahatsarana mahafinaritra" aza. Amin'ny volo mainty hoditra, miaraka amin'ny tranga tsy fahita firy, dia tsy misy mifangaro.
Ary ny isan'ireo modely samihafa dia tena lehibe ka ao anatin'izy ireo dia afaka mifidy akanjo mandritra ny fotoana rehetra. Misy aza safidy mety hitranga amin'ny takarivan'ny gala. Saingy ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny fomba nanaovana ny zavatra.
Ny kapoaky ny tarika Classic dia fihodinana tsotra ary mety amin'ny mandeha na ny fiofanana. Misy safidy hafa - amin'ny endri-tsoratra, dia aseho amin'ny trano lamaody maro izany. Ny sary malaza ho azy ireo dia biby sy floral.
Misy ihany koa ireo modely izay apetraky ny kiraro sy ny lamba mamirapiratra. Afaka mamolavola ny paosin-dry zareo izy ireo amin'ny fametrahana loko kely aminy. Saingy ny sora-baventy mainty hoditra, voapetaka amin'ny perla ary voaravaka kavina - ity dia akanjo hariva izay hanome anao amin'ny antoko.
Amin'ny inona no manao akanjo mainty hoditra?
Na inona na inona ataonao dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hampifandraisana ireo zavatra. Svitshot dia manondro ny karazana fanatanjahantena, ny fomba filalaovan'ny zavatra ary mila manangona tongolobe.
Ny safidy tsara dia ny jeans sy ny leggings, efa saika efa tsotra. Ny pantalonan'ny hoditra dia hanao mpivady mendrika ihany koa, ary azonao atao ny mampiaraka ny mozika amin'ny fahavaratra.
Ny dikan-teny malaza, ohatra, ny silk, dia mitaky anao hanisy akanjo ho azy, mialoha ny midi. Dia ho hitanao amin'ny fomba maotina sy mirindra.
Ny kiraro, miankina amin'ny tsipìka, dia afaka atletika (kiraro, kiraro), ary tsotra, mahazatra, izany hoe, afaka manao kiraro tsy misy kofehy. Ho an'ny tsipika fandevenana bebe kokoa, ny kiraro ankapobeny ary ny kiraro amin'ny kiraro.
Afomanga ho an'ny vehivavy
Hazo fanangonana ny makiazy 2013
Tar-tar avy amin'ny voaly - recipe